Home Wararka Guddigii Doorashada HF oo ka hadlay cabashada doorashada reer Banaadiriga
Guddigii Doorashada HF oo ka hadlay cabashada doorashada reer Banaadiriga
Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ayaa sheegay in guddigii uu Ra’iisul Wasaaruhu u xil-saaray xallinta khilaafkii ka dhashay kuraasta Banaadirigu ay xalliyeen buuqii ka dhashay kuraastaas.
Guddiga ayaa sheegay in doorashada la fasaxay diiwaangelintuna ay billaabanayso. Waxayna ugu baaqeen musharraxiinta kuraasta Banaadiriga in ay isku diyaariyaan doorashada oo maalmaha soo socda dhacaysa.
Doorashada Banaadiriga ayaa dhowaan waxaa ka dhashay buuq iyo isqabqabsi kadib markii beelaha leh kuraasta ay ka cowdeen in fara galin xooggan lagu hayo odayaasha soo xulaya ergooyinka doorashada.
Raysal wasaaraha ayaa doorashada hakiyay, isagoo guddigan u magacaabay in ay xalliyaan cabashada kasoo yeertay odayaasha dhaqanka Banaadiriga.
Previous articleKulankii loo balansanaa ee Saciid Deni & Isimada Gobolka Bari oo maanta la filayo in uu qabsoomo
Next articleMarkii 7aad oo la baalmaray waqtigii lagu heshiiyay in doorashada BFS lagu soo afjaro, Maxa xigi doono?
kooxo hubeysan oo nabadoon ku dilay Dagmada Wadajir
Golaha Iskaashiga DG (GIDG) oo o ka soo horjeestay ceyrinta Nicholas...